Unxweme lwe-Getaway St. Helens. - I-Airbnb
Unxweme lwe-Getaway St. Helens.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMadeline
Indawo entle yokulala enamagumbi amabini, ekwisitrato esithuleyo kuphela imizuzu emi-4 ukusuka kwiivenkile zalapha ekhaya, iivenkile zokutyela kunye neendawo zokutyela eSt. Helens. Seta i-150m ukusuka kwindlela yokuhamba / ibhayisekile, unxweme, ijethi yokuloba kunye nemizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka ebaleni lokudlala. Umgangatho omkhulu, igumbi lokuphumla kunye negumbi lokulala eliphambili libonisa umbono we-bay. Imizuzu engama-20 ukuya kwiilwandle ezintle, iBinalong Bay kunye neBay of Fires indawo. Indawo egqibeleleyo yokuphumla ngokulula kwabangatshatanga, izibini kunye neentsapho. Uya kuba nokufikelela ekupaka imoto yakho ngaphandle kwesitrato.
Indawo yethu yenzelwe ukwenza iindwendwe zizive zamkelekile, zikhululekile kwaye zisekhaya ngexesha lokuhlala kwazo nathi. Siye sayila indawo yethu ukuba isebenze ukuze iindwendwe zisebenzise njengesiseko sokuhlola i-East Coast.
Sibonelela ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze iindwendwe zilisebenzise xa zizonwabisa, oku kubandakanya ifriji elingana nosapho, indawo eninzi yebhentshi ephezulu, indawo yokulala, umphezulu wokupheka oqhelekileyo kunye neoveni enokupheka okwaneleyo kunye nempahla yasekhitshini. Ukongeza, sine-Webber BBQ ekhoyo kwindawo engaphandle eneendawo zokuhlala ezaneleyo zangaphandle, sikwanayo nendawo yokuhlamba impahla ekhoyo yeendwendwe ezinokuzisebenzisa ngexesha lokuhlala kwazo.
Sikwanazo neportacot, isitulo esiphakamileyo nezinto zokudlala zabantwana neencwadi ezifumaneka xa ziceliwe kwabo bahamba nabantwana.
Jonga ezinye iifoto zendawo yethu @coastal_getaway_st.helens
4.87 out of 5 stars from 554 reviews
4.87 · Izimvo eziyi-554
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi554
Ifumaneka kuphela kwimizuzu emi-4 yokuqhuba ukusuka kumbindi wedolophu yase-St. Helens, i-Coastal Getaway yethu ibekwe ngokulula ukuze ujonge unxweme oluseMpuma lweTasmania, ngelixa isonwabela indawo ethe cwaka yekhaya kunye nokukroba kweGeorge's Bay ukuze ungene kuyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Madeline
Kubalulekile kuthi ukuba iindwendwe zibe namava amnandi, okwamkela nokuphumla ngelixa zihleli eCoastal Getaway yethu - siyafumaneka nanini na nge-inbox ka-Airbnb, kunye nemibandela efuna impendulo engxamisekileyo siyaqhagamshelwana naye ngomnxeba nanini na kwaye sihlala ekuhlaleni.
Kubalulekile kuthi ukuba iindwendwe zibe namava amnandi, okwamkela nokuphumla ngelixa zihleli eCoastal Getaway yethu - siyafumaneka nanini na nge-inbox ka-Airbnb, kunye nemibandela…
Inombolo yomthetho: DA 237-17
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- St. Helens